Ciidamada Screen Android - Sidee loo Diiwaan Android Screen
> Resource > Android > Sida loo qabsaday oo Record Android Screen
Waxaan doonayaa in aan ka app Android oo lacag la'aan ah in ay si ay u qoraan app a socda sida video sida ay leeyihiin video demo ee app ah karin.
Ma doonaysaa in aad la wadaagto aad shaashadda Android saaxiibada? Hayso kulan Android jecel oo doonaya in ay u qoraan video ah? Waa hagaag, ma ahan adag tahay in la dhammeeyo iyo wax ka badan. Halkan, waxaan jeclaan lahaa in uu ku tuso sida loo soo qabto oo rikoor screen on Android phone.
Qaybta 1. screen Android qabashada
Qaybta 2. Record Android screen
Qaybta qabashada 1. Android screen
Si aad u Android shaashadda telefoonka video qabashada fudud, waxaad isku dayi kartaa Wondershare MobileGo (dadka isticmaala Windows) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) (isticmaalayaasha Mac). Software waxaa inta badan loogu talagalay maareeyo xogta ku saabsan telefoonka Android ama kiniin ka Windows PC ama Mac. Ka sokow, labada qeybood oo ha idin ​​qabsadaan videos, shaashadda ciyaarta telefoonka aad Android 1 click.
Download Free software ka qabashada bandhig u Android telefoonka gacanta oo kiniin ah. Hayso isku day ah!
Fiiro gaar ah: Halkan, waxaan buuxi doonaa hawsha la version Windows ah. Sida user Mac ah, waxaad qaadi karaan tallaabooyinka ka mid ah iyo sidoo kale.
Tallaabada 1. Connect Android phone / kiniin in kombiyuutarka
Si aan ku bilaabo, xirmaan telefoonka Android ama kiniin la kombiyuutarka via cable USB ah. Dadka isticmaala Windows, waxa kale oo aad ka dhigi kartaa xidhiidhka ka via Wi-Fi. Ku rakib iyo abuurtaan MobileGo kombiyuutarka. Marka barnaamijkan ogaadaa telefoonka Android ama kiniin ah, waxaad ka heli doontaa suuqa kala aasaasiga ah sida shaashadda hoose wuxuu muujinayaa:
Tallaabada 2. Ciidamada screen Android
Fur telefoonka Android ama kiniin. Raadi shaashadda in aad rabto in aad shaashadda. Waxaad ka ciyaari kara filim ama play kulan. Marka video ama ciyaarta jirsado shaashadda aad jeceshahay in lagu soo qabto, guji Screenshot in ay qabsadaan movie screen Android, kulan ama kale.
Si aad u bedesho screen ku saabsan telefoonka Android ama kiniin ah, waxaad click ku hadeeyey oo icon helid soo socda si Screenshot . Markaas, guji Screenshot mar kale.
Taasi tutotrial ah oo ku saabsan sida loo soo qabto screen Android. Waa sahlan tahay, sax?
Download MobileGo in ay isku dayaan!
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Android SDK
Download iyo rakibi Android SDK , markaas siibka file ah oo guji setup.exe SDK. Halkan yimaado daaqad yar oo aad weydiisanaya ah iyadana rakibaadda iyo tayeynta aad markii ugu horeysay markii ay furan SDK ah. Haddii aad rabto in aad qaadato shaashada ee Android, doortaan "xirmo darawalka USB" oo guji update. Waxaan u soo jeedin si loo casriyeeyo oo dhan baakadaha. Ma qaadan doono muddo dheer.
Tallaabada 2. Hook aad Android inay computer via cable USB ah
Tallaabada 3. Open DDMS (Debug Dalvik ka Monitor) iyo bilaabaan in ay qabsadaan screen
Waxaad ka heli doontaa fayl dheeraad ah oo ku hoos folder file SDK markii update la dhammeeyo. Tag folder qalab iyo guji ddms.dat. Waxaa jiri doona suuqa kala DOS ah. Ha la xiro oo sug ilbiriqsi, nidaamka lagu ogaan doonaa Android oo ku siin liiska qalabka Android ku xiran.
Dooro telefoonka aad Android, dooran Device Menu | Ciidamada Screen oo aad waxaad yeelan doontaa shaashadda. Waxaa la isku beddeli karaa, badbaadiyey ama soo guuriyeen.
Tallaabada 4. duubista Android screen video
Ilaa hadda ma jiraan wax codsiga saddexaad xisbiga kuu ogolaanaya inaad si ay u qoraan screen Android sida video screencast ah, laakiin halkan waa weli qaar ka mid ah fursadaha ay u samaysaa daah video ee Android. Raac habka kor ku xusan, Airline ah oo taariikhqorihii screen Android sida DemoCreator dooro shaashadda Android sida goobta lagu qoro si aad bilaabayso duubo mooshin buuxa. Waxaad ku shaqeeyaan kartaa telefoonka halka dhiig shaashada ee Android screen si joogto ah. Si kastaba, tani waa hab aad u xun si ay u qoraan bandhigay video ah Android phone. Iyadoo horumarinta deg deg ah oo software telefoonka gacanta, codsiga oo loo isticmaali karo si ay u qoraan bandhigay telefoonka Android soo yaabaa in ugu dhakhsaha badan!
Download Demo abuura hadda!
Sida loo Play PowerPoint Madasha on TV
Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka tirtiraa HTC Hero
Habka ugu fudud ee Ku rakib .apk Faylal ay ku Android